Revhitiko 6 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
6 Zvino Jehovha akataura naMosesi, achiti: 2 “Kana mweya ukatadza pakuti munhu wacho anova asina kutendeka kuna Jehovha,+ akanyengera+ mumwe wake pamusoro pechinhu chaakanzi atarisire kana kuti chaakabatiswa+ kana kuti pamusoro pougororo kana kuti akabiridzira mumwe wake,+ 3 kana kuti akawana chinhu chakarasika,+ akareva nhema pamusoro pacho, opika zvenhema+ pamusoro pechinhu chero chipi zvacho pazvinhu zvose zvingaitwa nomunhu kuti zvimutadzise; 4 zvino kana akatadza uye chokwadi ova nemhosva,+ anofanira kudzorera chinhu chakabiwa chaakaba kana kuti chinhu chakatorwa nechisimba chaakatora nokubiridzira kana kuti chinhu chaari kutarisira chaakanzi atarisire kana kuti chinhu chakarasika chaakawana, 5 kana kuti chero chinhu chipi zvacho chaangapika zvenhema nezvacho, anofanira kuchiripa+ zvakakwana, ngaawedzere kwachiri chikamu chimwe chete pazvikamu zvishanu. Ngaachipe muridzi wacho pazuva raanobatwa kuti ane mhosva. 6 Sechinopiwa chake chemhosva, ngaauye kuna Jehovha, kumupristi, negondohwe rakanaka+ rinobva pamakwai rinoenderana nokukosha kwakatarwa, kuti rive chinopiwa chemhosva.+ 7 Mupristi anofanira kumuyananisira+ pamberi paJehovha, akanganwirwe chero chinhu chipi zvacho pazvinhu zvose zvaangaita chingaguma chaita kuti ave nemhosva.” 8 Zvino Jehovha akaramba achitaura naMosesi, achiti: 9 “Rayira Aroni nevanakomana vake, uchiti, ‘Uyu ndiwo mutemo wechinopiwa chinopiswa:+ Chinopiwa chinopiswa chichava pachoto chiri pamusoro peatari usiku hwose kusvikira mangwanani, uye moto weatari uchabatidzwa mukati mayo. 10 Mupristi anofanira kupfeka nguo yake yebasa yerineni,+ uye ngaapfeke chikabudura cherineni+ pamuviri wake. Anofanira kubvisa madota ane mafuta+ echinopiwa chinopiswa chinowanzopiswa nomoto pamusoro peatari, uye anofanira kuzviisa parutivi peatari yacho. 11 Anofanira kupfekenura nguo dzake,+ opfeka dzimwe nguo, uye anofanira kuendesa madota ane mafuta kunzvimbo yakachena iri kunze kwomusasa.+ 12 Moto uri paatari ngauitwe kuti urambe uchibvira pairi. Haufaniri kudzima. Mupristi anofanira kubatidza huni+ dziri pauri mangwanani oga oga, oronga chinopiwa chinopiswa pamusoro pawo, uye anofanira kuita kuti mafuta ezvibayiro zvokugoverana apfungaire pamusoro pawo.+ 13 Moto+ ngauitwe kuti urambe uchibvira nguva dzose paatari. Haufaniri kudzima. 14 “‘Zvino uyu ndiwo mutemo wechinopiwa chezviyo:+ Imi vanakomana vaAroni, uyai nacho pamberi paJehovha pamberi peatari. 15 Mumwe wavo anofanira kunokora tsama yake yefurawa yakatsetseka yechinopiwa chezviyo nemamwe emafuta acho nezvinonhuhwirira zvichena zvose zviri pamusoro pechinopiwa chezviyo, uye anofanira kuita kuti zvipfungaire pamusoro peatari kuti zvive kunhuhwirira kwakanaka kwokuyeuchidza+ kunoitirwa Jehovha. 16 Zvinosara ngazvidyiwe naAroni nevanakomana vake.+ Ngazvidyirwe munzvimbo tsvene semakeke asina kuviriswa.+ Ngavazvidyire muchivanze chetende rokusanganira. 17 Hazvifaniri kubikwa pamwe chete nechinhu chero chipi zvacho chine mbiriso.+ Ndakazvipa kuti zvive mugove wavo unobva pazvinopiwa zvandinopisirwa nomoto.+ Icho chinhu chitsvenetsvene,+ sezvakaita chinopiwa chechivi uye sezvakaita chinopiwa chemhosva. 18 Vanhurume vose+ pavanakomana vaAroni ngavazvidye. Iwo mugove nokusingagumi+ unobva pazvinopiwa zvinopisirwa Jehovha nomoto muzvizvarwa zvenyu zvose. Chinhu chose chingazvigunzva chichava chitsvene.’” 19 Zvino Jehovha akataura naMosesi, achiti: 20 “Ichi ndicho chinopiwa+ chaAroni nevanakomana vake chavachauya nacho kuna Jehovha pazuva raanozodzwa:+ chegumi cheefa+ yefurawa yakatsetseka kuti chive chinopiwa chezviyo+ nguva dzose, hafu yayo mangwanani uye hafu yayo manheru. 21 Ngachibikirwe mugango+ nemafuta. Uuye nacho chakanyatsovhenganiswa. Uuye nezvakabikwa zvechinopiwa chezviyo zviri zvimedu-zvimedu kuti zvive kunhuhwirira kwakanaka kunoitirwa Jehovha. 22 Mupristi, uya anozodzwa panzvimbo pake anobva pavanakomana vake,+ achachipa. Iwo murau nokusingagumi: Ngachiitwe kuti chipfungairire kuna Jehovha sechinopiwa chakakwana.+ 23 Zvinopiwa zvezviyo zvose zvomupristi+ ngazvive zvinopiwa zvakakwana. Ngazvirege kudyiwa.” 24 Zvino Jehovha akataurazve naMosesi, achiti: 25 “Taura naAroni nevanakomana vake, uchiti, ‘Uyu ndiwo mutemo wechinopiwa chechivi:+ Munzvimbo+ munogara muchiurayirwa chinopiwa chinopiswa ndimo muchaurayirwawo chinopiwa chechivi pamberi paJehovha. Icho chinhu chitsvenetsvene.+ 26 Mupristi anochipa nokuda kwechivi ngaachidye.+ Ngachidyirwe munzvimbo tsvene+ muchivanze+ chetende rokusanganira. 27 “‘Zvinhu zvose zvingagunzva nyama yacho zvichava zvitsvene,+ uye kana munhu akadonhedzera rimwe ropa racho panguo,+ ugezere chaanodonhedzera ropa chacho munzvimbo tsvene.+ 28 Mudziyo wevhu+ machingabikirwa unofanira kuputswa. Asi kana chakabikirwa mumudziyo wemhangura, ngaubve wakweshwa, wosukurudzwa nemvura. 29 “‘Vanhurume vose pavapristi ngavachidye.+ Icho chinhu chitsvenetsvene.+ 30 Asi, hapana chinopiwa chechivi chine rimwe ropa+ richapinzwa mutende rokusanganira kuzoyananisira munzvimbo tsvene chinofanira kudyiwa. Chinofanira kupiswa nomoto.